Ciidanka Qaranka Somaliland Oo Gacanta Ku Dhigay Gaadiid Lagala Baxsaday Malayshiyada Buuhoodle Iyo Saleebaan Xagla-toosiye Oo Xaaladiisu Khatar Gashay – Araweelo News Network (Archive)
Laascaanood(ANN)Ciidamada Qaranka ee Somaliland, ayaa gacanta ku dhigay laba gaadhi oo nooca gaashaaman ah iyo hal gaadhi oo land- cruser ah, kuwaas oo lagala soo go’ay kooxda nabad diidka ah ee Khaatumo ee xaruntoodu tahay Buuhoodle.
Taliyaha Ciidamada Qaranka ee Somaliland General Ismaaciil Maxamed Cismaan (Shaqale) oo maanta war-saxaafadeed soo saaray, ayaa sheegay in labada gaadhi ee Tiknikada ah noocoodu kala yihiin GMC,iyo Mid Toyoto ah oo qori saaran yahay.
Taliyuhu waxa uu cadeeyay in labada gaadhi ee Tiknikada ah bishii March ee Sannadkan lagala baxsaday Ciidamada Qaranka, kuwaas oo loola galay Cadawga nabad diidka ah,halka gaadhiga Land Cruserka ahna lagu sheegay inuu yahay kii lagu dilay labadii nin ee watay ee laga dhacay Tuulada Gawsa weyne.
Taliyuhu wuxuu intaa ku daray in gaadiidkaa ay hada ku sugan yihiin fadhiisinka hore ee ciidamada qaranka ee deegaanka ee Gambadha.
Dhinaca kale warar kale ayaa sheegaya in xiisad iyo khilaaf ka taaganyahay xarunta Buuhoodle ee malayshiyadaa fadhiisinka u ahayd, iyadoo wararka qaar sheegayaan in Hogaamiyihii kooxdaa Saleebaan xagla-toosiye oo dhowaan sheegay inuu qaatay nabada Somaliland ku baaqday ay arrintaasi saamayn ku yeelatay, isla markaana xaaladiisu khatar gashay, markii ay malayshiyadu u galeen ciidanka qaranka Somaliland, balse ma jiraan warar madax-banaan oo ka hadlaya arrintaa.
Laascaanood Oo Si Foolxun Loogu Toogtay Sarkaal Xukuumadda Somaliland Ka Tirsan